नेताहरुसँग प्रचण्डको सेप्रेड भेट, मन्त्रीमा को–कसले मार्दैछन् बाजी ? — Imandarmedia.com
नेताहरुसँग प्रचण्डको सेप्रेड भेट, मन्त्रीमा को–कसले मार्दैछन् बाजी ?
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहा प्रचण्डले मन्त्रीका आकाँक्षी नेताहरुलाई बेग्ला बेल्लै भेटघाट सुरु गरेका छन् । मन्त्री बनाउने विषय र पार्टी थप जिम्मेवारीका विषयमा छलफल गर्नका लागि बेग्ला बेल्ला भेटघाट गरेका हुन् ।
मन्त्री छान्न स्थायी समिति बैठक प्रचण्डलाई पूर्ण अधिकार दिएपछि प्रचण्डले नेताहरुको अपेक्षा बुझ्नका लागि छुट्टा छुट्टै भेटघाट गरेका हुन् । यो छलफल पछि मन्त्रीका आकाँक्षीको सिस्ट पातलिएको छ । एक नेताका अनुसार अहिलेलाई मन्त्रीमा दावि नगर्नुहोस्, तपाईलाई विशेष जिम्मेवारी दिन्छु, अहिले नरिसाउनु भनेका छन् ।
निरास हुँदै प्रचण्डलाई भेटेर फर्किएका ती नेताले भने, ‘यो चोटी मेरो सम्भावना लगभग सकियो । आशा मारेरै फर्किए ।’केही समयअघिसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्री बन्नेहरूको सूची लामो थिए । धेरै सांसदले मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रमा नै मन्त्री बन्न धेरैले दबाब दिएको बताएका थिए ।
दाहालले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नामबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा माओवादीले ६ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउने लगभग टुंगो लागिसकेको छ । तर कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो नलागेको दाहाल निकट एक नेताले जानकारी दिए ।
माओवादीमा अहिले ५ जना सांसदहरू मन्त्रीका लागि दाबेदार रहेका छन् । ति नेताका अनुसार माओवादीका शीर्ष नेताहरूले देवेन्द्र पौडेल, सुदन किराती, महेश्वर गहतराज, शशी श्रेष्ठ र शिवकुमार मण्डल मध्ये एक राज्यमन्त्रीसहित ४ जना मन्त्री हुनेछन् ।
देउवा सरकार गठन भएको आज ७३ औँ दिन पुगेको छ । हालसम्म देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । माओवादीबाट देउवा नेतृत्व सरकारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल सहभागी छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सामन्ती हिन्दू अतिवादी भएको आरोप लगाएका छन् ।बिहीबार काभ्रेको पाँचखालमा आयोजित वाईसीएलको कार्यक्रममा उनले ओली मार्क्सवादी नभएको जिकिर गरे ।
ओली प्रवृत्तिबारे आफूले तत्कालीन नेकपामा १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘ओली प्रवृत्ति विचारको हिसाबले कम्युनिस्ट होइन, माक्सवादी होइन, यो सामन्ती हिन्दू अतिवादी हो, (पशुपतिनाथमा) जलहरी चढाएको त सुन्नुभयो होला । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राम सीता हनुमान राखिदिएको छ । … कम्युनिस्टले यस्तो काम गर्छ त ?’
ओलीले महान् नेता हुने अवसर गुमाएको पनि प्रचण्डले बताए ।
‘केपीजत्ति वुद्धि नभएको नेता कोही पनि छैन । यति ठूलो अवसर उनलाई थियो, चुप लागेर एकताको बेलामा भएको समझदारी पालना गरेको भए केपी ओली नेपालको इतिहासमा महान् नेता हुने अवसर थियो,’ उनले भने ।
नयाँ पार्टी बनाउन साथ दिएकालाई माधवले दिए पदैपद
क महिनाअगाडि निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दल दर्ताको प्रमाणापत्र पाएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमालेको भन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । तीन दिन चलेर बिहीबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारीसहित पार्टी केन्द्रका कमिटीका आकार तय गरेको छ ।
बैठकले तीन सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । त्यस्तै, ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ७१ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । बैठकले १८ सदस्यीय पदाधिकारी पनि चयन गरेको छ । माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको पदाधिकारीमा दोस्रो वरीयतामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल छन् । अन्य पदाधिकारीभन्दा माथि रहने गरी तेस्रो वरीयतामा मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टी नेताका रूपमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, महासचिवमा बेदुराम भुसाल, उपाध्यक्षहरूमा राजेन्द्र पाण्डे, धर्मनाथप्रसाद साह, प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत, केदार न्यौपाने, केशवलाल श्रेष्ठ र जयन्ती राई चयन भएका छन् । उपमहासचिवमा प्रकाश ज्वाला, डा. गंगालाल तुलाधर र डा. विजय पौडेल छन् । यस्तै, सचिवमा रामकुमारी झाँक्री, जगन्नाथ खतिवडा, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी र राजेन्द्र राई रहनेछन् ।
योगदान, इतिहास, योग्यताका आधारमा पदाधिकारी छनोट गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताए । बैठकपछि उनले भने, ‘जिम्मेवारी बाँडफाँडमा योगदान, इतिहास, योग्यता, क्षमता सबैलाई आधार बनाइएको छ । मूलतः पुराना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, पुरानो पोलिटब्युरोका सदस्यलाई अथवा सिनियर नेता–कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ ।’
पार्टी विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका ५५ केन्द्रीय सदस्यले नेपाललाई साथ दिएका थिए । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीका २३ र एमालेका ९७ सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका सात र एमालेका २६ सांसद छन् । यद्यपि, आयोगमा सनाखत गरेकामध्ये शारदादेवी भट्ट र सोमप्रसाद पाण्डेले पनि अदालतबाट सनाखतका लागि मान्यता पाएका छन् । सनाखत गर्ने माया ज्ञवाली र तुलसा थापा अनिर्णीत छन् ।
प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादी १० र एमाले ४१, प्रदेश २ मा एकीकृत समाजवादी १३ र एमाले आठ, बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी १३ र एमालेका ४३, गण्डकी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी शून्य र एमाले २७, लुम्बिनी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी एक र एमाले ३६, कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी तीन र एमाले १३ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी १४ र एमालेका ११ सांसद छन् ।
एकीकृत समाजवादीले यसअघि नै प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रदेश १ मा घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश २ मा धर्मनाथप्रसाद साह, बागमती प्रदेशमा केदार न्यौपाने, गण्डकी प्रदेश केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशमा भगवत विश्वासी, कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वाला, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिमा शाह इन्चार्ज भएका छन् ।
नेकपा एसले यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नसकिने निर्णय लिएको छ । राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने उसको धारणा छ । ‘एमसिसीको विषय अत्यन्तै ठूलो चर्चा भइरहेको छ । यो राष्ट्रिय हितको अनुकूल नभएकाले यसलाई पारित गरेर अघि बढ्न नसकिने, राष्ट्रिय हितको अनुकूल बनाई र राष्ट्रिय सहमति कायम गरी मात्रै अघि बढ्न सकिनेछ । आजको अवस्थामा अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने प्रस्ताव हामीले पारित गरेका छौँ,’ प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने ।
बैठकमा अध्यक्ष नेपालले एमालेका नेताहरूले आफूहरूविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरेको आरोप लगाएका थिए । ‘प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहेको एमालेले हाम्राविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेको छ । आज मैले भाषण सुनेँ कि अब हाम्रो पार्टी अर्काे पार्टीमा मिसिन गइरहेको छ । यो शतप्रतिशत होइन, हजार प्रतिशत गलत छ । हाम्रो पार्टी कसैसित मिसिनुपर्ने आवश्यकता छैन । यसको आफ्नै जग बलियो छ ।’
नेपालले बैठकमा गठबन्धन नटुट्ने पनि केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराए । ‘हामी पाँच दलको गठबन्धनमा सहभागी छौँ । यो सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलबीच र नेताहरूबीच निकै राम्रो सम्बन्ध छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘बाहिर कसैले हल्ला फिँजाउन खोजे पनि यो गठबन्धन टुट्छ, फुट्छ, सरकार ढल्छ भन्नेमा कुनै सत्यता छैन ।’
नेपालले आफूहरू जबजमै दृढ रहेको पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘कसै–कसैले भ्रम पैदा गर्न खोजेका छन्, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले जबज छाड्न थाल्यो । यो सम्पूर्ण रूपमा गलत छ,’ उनले थपे, ‘एमालेको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनदेखि त्यसले अगाडि सारेको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक कार्यदिशामा दृढताका साथ उभिन्छौँ । त्यसलाई समय परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जबजको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा हामी दृढ छौँ ।’
प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले पनि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा जबजको सक्कली प्रतिनिधि आफूहरू रहेको बताए । उनले भने, ‘जबजको भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण पनि हो । जबज भनेको नेपाली जनताको जीवनशैली, स्तर र उसको आदर्श पनि प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक प्रणालीको एउटा व्याख्या हो, यसकारण हामी जबजलाई सही ढंगले प्रतिनिधित्व गर्दछौँ । जबजका सक्कली प्रतिनिधि हामी हौँ ।